Shengxin Ezemidlalo kunesithembiso izandla nge Youfa Group, futhi zako umphelelisi nomunye futhi afune ukuthuthukiswa ngokushesha. - China Tianjin Shengxin Ezemidlalo Izimpahla
Shengxin Ezemidlalo kunesithembiso izandla nge Youfa Group, futhi zako umphelelisi nomunye futhi afune ukuthuthukiswa ngokushesha.
Nge ngcono okuqhubekayo izindinganiso zabantu abaphilayo kuyanda eyingqabavu kazwelonke ukuqina ukunyakaza, ukukhiqizwa imishini ezemidlalo surely ube umkhakha kwelanga, futhi isikhala lezimakethe kuzoba yinto kakhudlwana futhi ebanzi ngaphezulu. Umkhiqizo eyinhloko Youfa Group, ashiselwe steel pipe, iyona main impahla eluhlaza for imishini ezemidlalo. Kuyinto nalemvelaphi ukuthi Shengxin Ezemidlalo Youfa Iqembu esesikwenzile ngempumelelo nokubambisana esekelwe isimiso complementarity mutual, enzuzweni kanye nekuzuza: Youfa Iqembu imali enkulu Shengxin Ezemidlalo has ukuphathwa kwabasebenzi kanye ocebile ukuphathwa isipiliyoni. Ukuhlinzeka izindawo ukunweba imisebenzi, zonke ngamapayipi ensimbi adingekayo Shengxin Ezemidlalo ithengwe kusukela ezingaphansi ka Youfa Group.
Ukubambisana saloluhlelo ithuba Shengxin Ezemidlalo ukuqinisa izikhwepha zayo kanye ezikhulisa yayo engaba futhi ukuthuthukisa ngokushesha hhayi kuphela. Libuye ngomzamo asebenzayo futhi inenzuzo yi Chain Youfa Steel Pipe Imboni ukunweba esezansi bese ufaka umkhakha imishini ezemidlalo.
isikhathi Thumela: Jul-19-2018